काठमाडौं : अपि पावर कम्पनीले २९.३८% हकप्रद सेयर भर्ने समय ४ दिन थप गरेको छ । अब लगानीकर्ताले यसमा असार १३ गतेसम्म आवेदन दिन पाउनेछन् । यसअघि अपिले जेठ २०देखि आज (असार ९ गते) सम्म मात्र हकप्रद भर्ने म्याद निर्धारण गरेको थियो । निषेधाज्ञाका कारण कम्पनीले हकप्रद भर्ने म्याद थप गरेको हो ।
अपिले जेठ २० गतेबाट प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले कुल ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । यसमा वैशाख २८ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले आवेदन दिन पाउनेछन् । बिक्री प्रबन्धकको काम मुक्तिनाथ क्यापिटलले गरेको छ । यो हकप्रदमा मुक्तिनाथ क्यापिटल, अपि पावर कम्पनी, ट्रेड टावर थापाथली तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकको इटहरी, पोखरा, नागढुंगा शाखाबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।
यसैगरी, नारायणगढ, सुर्खेत, नेपालगंज, धनगढी र जनकपुर शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन पाइनेछ । यसका साथै, मेरो सेयर सफ्टवेयरमार्फत अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिनेछ । अपि पावरको हकप्रद सेयरलाई रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी बी प्लस इस्युअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यस रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९२ करोड ९७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले यही पुँजीबाट १ः०.२९३८ अनुपातमा हकप्रद बिक्रीमा ल्याएको हो । यो हकप्रद बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । अपिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पनि पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ ।
हकप्रदको आह्वानपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुँजी विस्तार गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५८ करोड २७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने प्रक्षेपण छ ।
अपिले ४० मेगावाट क्षमताको अपर चलेमिया जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन चरणवद्ध रुपमा हकप्रद सेयर जारी गर्न लागिएको जानकारी गराएको छ । हाल यसको अधिकृत पुँजी ५ अर्ब र जारी पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ छ ।
लक्ष्मी उन्नति कोषको नगद लाभांश खातामा आउन थाल्यो
मुक्तिनाथ विकास बैंकको संस्थापक सेयर लिलामी खुला
२५ करोड रुपैयाँ राइट ब्याक गर्दा सूर्योदय लघुवित्तको नाफा कति पुग्यो ?
स्वावलम्बन लघुवित्तको कति छ प्रतिसेयर आम्दानी ?
१२ करोड पुँजी भएको गणपति लघुवित्तको कमाई कति ?
लक्ष्मी लघुवित्तले गर्यो आकर्षक प्रगति : नाफा १९६.०१% बढ्दा इपीएस कति ?